स्वास्थ्यका लागि ड्राइ फ्रुट खान जाने फाइदा नजाने घा,तक – yuwa Awaj
काठमाडौं- हामी प्राय सुन्ने गर्दछौं कि ड्राइ फ्रुट म त सधै जसो खान्छु । कति सम्म खादा यसले स्वास्थ्यमा फाइदा पु¥याउछ के पताईहरु ले कहिले यसको मात्रा मापन गर्नू भएको छ ? अमृत पनि खान नजान्दा वि,ष बन्छ त्यस्तै हरेक खाने कुराको मात्रा नजान्दा स्वास्थ्यलाई हानीकारक साबित हुन सक्छ ।
सहि मात्रामा ड्राइ फ्रुट खानु स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो मानिन्छ । ड्राइ फ्रुटमा कार्बोहाइड्रेट थोरै र प्रोटिन बढी भएको हुनाले मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरो,गीहरुको लागि फाईदाजनक मानिन्छ । साथै ड्राइ फ्रुटलाई मुटुको लागि राम्रो मानिन्छ ।
ड्राइ फ्रुटमा प्रशस्त एन्टिअक्सिडेण्ट पाइन्छ, जसले रो,ग नि,रोधक क्षमता बढाउछ । ड्राइ फ्रुटमा पाइने असंतृप्त फ्याटले ह्दयाघा,त तथा अन्य रो,गहरुबाट बचाउछ । तर यस्ता ड्राइ फ्रुट दैनिक मायसको मात्रामा मात्र खनाु पर्छ अन्यथा क्यालोरी धेरै भएकोले तौल बढ्न र यसले अन्य बेफाइदा पनि गर्नसक्छ ।
त्यसकारण हामीले ड्राइ फ्रुट दैनिक १ देखि २ मुठी वा १ देखि ८ वटा सम्म खाएमा स्वस्थकर मानिन्छ ।
(मुटु रो,ग विशेषज्ञ डा.ओम मूर्ति अनिलसँगको कुराकानीमा आधारित )
Prevनेपाल बन्दको बारेमा “सिधा कुरा जनतासँग” सम्झना भुजेलको कडा प्रस्तुति सबैले तारिफ गरे !
Nextउमेरले नेटो काट्दा पनि झनै सुन्दरी बनेकी नायिका करिश्मा मानन्धरको सुन्दरता सार्वजनिक गरिन यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता…..(केहि तस्बिर सहित)
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विदेशबाट आउनेलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारे’न्टिनमा राख्न सिफारिस…हेर्नुहोस् ।